अचेल को साहित्य जमातले थोरै देश लेख्ने ,युग बोल्ने लेख्छन् ः मिना देवकोटा – Mero Pradesh TV
meropradeshtv२०७७ कार्तिक २९ गते
नेपाली साहित्यका विराट् प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११२ औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली साहित्यप्रेमीहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउदै छन् ।
महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् आज लक्ष्मीपूजाकै दिन काठमाडौँको डिल्लीबजारमा भएको थियो । लक्ष्मीपूजाको दिन जन्म भएकोले उहाँको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखिएको हो ।
दश वर्षको सानै उमेरदेखि कविता लेख्न शुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविताहरु प्रकाशित छन् ।
नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गर्नुभएका देवकोटाको ‘मुनामदन’ खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तक हो ।
नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी–प्रगतिवादी धाराका प्रवत्र्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृतिप्रेम र क्रान्तिकारिता झल्किन्छ । उहाँका सिर्जनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै दर्शनको मिश्रण पाइन्छ ।
देवकोटा जयन्यतीको अवसरमा साहित्यप्रेमी सर्लाही साहित्य समाज सिन्धुलीकि चेली आदरणी मिना देवकोटा दिदी संग मेरो प्रदेश अनलाइ टिभीले संक्षिप्त कुरा गरेको छ । उहाँको जन्म सिन्धुली को जरायो टार गा .वि.स वडा न.४क्वामिन डाँडा मा विसं २०२६ कार्तिक १२ गते भएको थियो । प्रस्तुत छ मिना देवकोटा दिदी संग मेरो प्रदेश अनलाइ टिभीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
हजुर सन्चै छु
अचेल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अचेल कृषि पेसा र गृहिणीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै केही समय बचाएर साहित्य सिर्जना मै व्यस्त छू ।
सर्वप्रथम के भन्न चाहनु हुन्छ ?
देश तथा विदेशमा विभिन्न सिलसिलामा छरिएर रहनु भएका नेपाली दाजूभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा शुभ दिपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मँगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
आज महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती कसरी सम्झनु हुन्छ देवकोटालाई ?
सर्बप्रथम महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ज्यु प्रति भाव पुष्प ले श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छू । आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भौतिक शरीर हामी माँझ नभएपनि उहाँले सिर्जना गर्नु भएको कृर्तिहरु मार्फत उहाँ अमर हुनुहुन्छ । वहाँको नेपाली साहित्यमा योग्दान त अतुलनीय छ । देवकोटाको नेपाली साहित्यमा
अभाव खड्की रहेको देखेको छु ।
अचेलको साहित्यमा के लेखिएको पाउनु हुन्छ ?
अचेल को साहित्य जमातले थोरै देश लेख्ने युग बोल्ने र धेरै अर्का को खोइरो खन्दै माया प्रेममा भौतारिने स्वार्थ पुर्तिलाइ मान सम्मान र व्यवसाय नाफातर्फ अग्रसर भएर लक्षित विषय चैँ ओझेल मै रहला कि जस्तो डरलाग्छ ।
तपाइको बुझाइमा साहित्य कसरी लेखिन्छ ?
मानव समाज को परिचय भाषा र भाषा को विकास साहित्यबाट भएको मेरो सरल बुझाइ छ । साहित्य ले जीवन र जगत् का विषयमा सरस पुर्ण शैलिमा विभिन्न योग—समयोग र वियोग नै कर्म बनाउदै अभिव्यक्त गरिने शब्द हरु कलम को साहारा लिएर लेखिन्छ । साहित्य जान्दै नजान्ने मान्छे मैले देखेकै छैन । अनादि काल देखि चार वेद छ अठार पुराण छ भुगोल छ । सबै त्यसैमा समाहित छ मात्र बिधागत रुचि अनुसार चिन्तन अनुसार आवाश्यएकता अनुसार अध्यन अनुसार । सिर्जना हुन्छ मत साहित्यलाइ बुझ्ने बुझाउने भन्दापनि सुन्ने र सिक्न मन पराउने सामान्य विवेक भयको ले होला जसरी अन्न आहार र प्रेम बाट विचलित हुँदा को अवस्था कठिन हुन्छ त्यसैगरी नै साहित्य लाई प्राण आधार नै सम्झन्छू । शैक्षिक योग्यता बिना नै साहित्य बुझाउने प्रयास गरे त्यसैले अग्रज र दिग्जग समपुर्ण साहित्य साधक सजर्जक बृन्द सामू क्षमा याचना गर्दछु ।
तपाइको विचारमा साहित्यमा के लेखिनु पर्छ ?
साहित्यमा जातिय तथा लैँगिक विभेद अब लेख्नु नपरोस भौगोलिक र मानवीय विभेद को दर्द लेखिनु पर्छ ।
तपाइलाई साहित्यमा लाग्न कतिको कठिन छ ?
आर्थिक अभाव देखि डब्बल तेब्बर जिम्मेवारी को कठिनाइ , श्रीमान र परिवार जन को हृदय दुख्ने वचन को प्रहार मानसिक ,शारीरिक तनाव समाज नकारात्मक बुझाइ जस्ता कुरा को सामना गरिरहेकि छू ।
अहिले मुक्तक ,गजल , पद्यकविता , र सँस्मरण गीत समयले जे फुर्छ तेहि लेखि रहेकि छू ।
प्रयासको प्रतिकृया कस्तो आयो ?
सुरु सुरु मा उत्साह जनक प्रतिकृयाहरु आए , भर्खर मात्र कृति लेख्न खोजेकी छु । प्रतिकृया कम आयपनि राम्रो आएको छ ।
तपाइको अर्को कृति आउने कतिको सम्भावना छ ?
प्रयास त अनेकौँ भैइरहेको छ । व्यक्ति गत भन्दा सँयुक्त कृति प्रकाशनमै व्यस्त छु । सम्पादन र आर्थिक अभावको कारण आफ्नै व्यक्तिगत कृति त अहिले आउने सम्भावना न्यून छ । अहिले सँस्थागत कामले फुर्सद छैन ।
अहिले साहित्यमा लागेका र लाग्न चाहनेलाई के भन्नु हुन्छ ?
साहित्यमा लागेहरुलाई अग्रज साहित्य साधकहरु को सँघर्ष र त्याग तपस्या को सम्मानका साथ उच्चमहत्व दिदै निर्भिक भएर लाग्नुस तपाईं हरुको बाटो केही फराकिलो र सहज हुँदै छ भन्न चाहन्छू ।
साहित्य पेसा हैन तथापि आत्मा सन्तुष्टिकै लागि लेखेपनि समाज को राष्ट्रको काम हो मरे पछि सालिक बनेर पुजिनु मात्र हैन जिवित मै खुसी र आत्म सम्मान को मालिक हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा यस अनलाइ पत्रिकाले म संग कुराकानी गरेर ,मलाइ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र आफ्नै बारे दुइचार कुरा राख्ने अवसर दिएकोमा यस पत्रिकालाइ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
व्यस्त समयको बाबजुत पनि मेरो प्रदेश अनलाइ टिभीलाई कुराकानी गर्न समय प्रदान गर्नु भएकोमा सिन्धुलीकि चेली आदरणी मिना देवकोटा दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद छ ।
मलंगवामा दैनिक उपभोगका पसलदेखि स्टेशनरी दुई घण्टा खोल्न दिने निर्णय
रौतहटबाट चोरीको बियर बरामद
सिरहामा राहतको विषयलाई लिएर दुई पक्ष बिच झडप
धनुषामा बालिकामाथि सामुहिक बलात्कार,
काेराेनाबाट थप एककाे मृत्यू
२०७७ भाद्र २ गते